IMBALI EQALEKISIWEYO YECROW - UKUQALA KWAKHONA
Dr Pamela L Isitabane
Abagcini Bomthala Vol 3
Imbali eqalekisiweyo yeCrow
Ngu-Okthobha, ke oko kuthetha ukuba sinesizathu sokubhiyozela ezinye zeefilimu ezibekekileyo zeHalloween kunye nolonwabo lwe-gothic. Kwaye akukho bhanyabhanya ilingana nelo bhili ingcono kunonqulo lwe-1994, Unomyayi . Ifilimu yoqobo yazalwa ngentlekele kwaye yakhutshwa kwisithunzi sokuseta kwenkwenkwezi yayo, u-Brandon Lee. Kodwa kangangeminyaka engama-25 ukusukela oko, iHollywood izamile ukugcina ipropathi iphila- kwaye yasilela ngandlela zonke.
Unomyayi baqala ubomi njengeqhula ngo-1989 nguJames O'Barr. Ibali lemvumi evukayo kwabafileyo ukuphindezela ukubulala kwakhe kunye nokubulawa komyeni wakhe iphefumlelwe ngu-O'Barr yokuphulukana kabuhlungu nesithandwa sakhe kumqhubi onxilileyo. Yayiyindlela ka-O'Barr yokumelana nelahleko. U-O'Barr uxelele iBaltimore Sun ngo-1994:
Ndizamile zonke iindawo ezinendawo enomsindo, njengokusebenzisa gwenxa iziyobisi kunye nokuya kwiiklabhu okanye emathekweni rhoqo ebusuku kwaye ndizama ukuzigcina ndindisholo ixesha elide kangangoko kunokwenzeka… Ekugqibeleni ndaye ndanengqondo ngokwaneleyo ukuba ndiqonde ukuba Ukuphela kwexesha, kwaye ke ndacinga ukuba mhlawumbi ndibeka into ephepheni ndingaphakamisa omnye waloo msindo.
I-comic yayimnyama, inobundlobongela kwaye ibetha ngokubonakalayo, zonke izichazi ezinokusetyenziswa kwifilimu ka-1994, ekhokelwa nguAlex Proyas. Kwakunzima, imveliso enzima kodwa abavelisi babesazi ukuba yinto ekhethekileyo. Ifilimu yayiyikhefu elikhulu likaBrandon Lee, unyana kaBruce Lee odumileyo kunye nokusebenza kwakhe kuyo kukujika kwenkwenkwezi. Kodwa U-Lee wabulawa kabuhlungu xa umpu osetyenzisiweyo usetelwe kuye ngeseti ngengozi engenanto kunye neqhekeza lembumbulu eligxunyekwe egumbini. Ukusweleka kukaLee kusondele kakhulu kwilifa Unomyayi , ibali lomntu ongafuni kufa ngenxa yothando, kwaye eyona nto ibuhlungu kukuba yena, njengomlingiswa wakhe, uLee wayetshatile ngelo xesha.
Igweba kwifom ehlekisayo
Zonke izakhelo ze Unomyayi kuhle. Yinto emanzi, emnyama, enobundlobongela, i-punk, i-noir, yobugcisa be-gothic. It kuvulwe kwinombolo yokuqala , kwaye siyabulela kwi-infamy ehambelana nayo, kunye nenyaniso yokuba ngumboniso bhanyabhanya omkhulu kwaye unengoma emangazayo ngokumangalisayo, yayiyeyona nto inyanisekileyo. Ibali le Unomyayi indalo iphelile, imalunga nendoda efumana ithuba elinye lokuziphindezela ngokubulala kwayo. Kodwa umbono-wokuba unomyayi ungabuyisa umphefumlo womntu obulewe ngokungafanelekanga ngenxa yempindezelo- yayiluhlobo lwehuku apho ii-90s zaseHollywood zazifuna ukuxhaphaza. Oku kukhokelele kulandelelwano luka-1996, Unomyayi: IsiXeko seengelosi .
Ukuba eyokuqala Unomyayi loloyiso lomoya, umculo kunye neentsomi, Isixeko seeNgelosi kukusilela okungaginyisi mathe kubuhle bebali kunye nefuthe. Ifaka uVincent Perez kunye noMia Kirshner njengoSara okhulileyo kwifilimu yokuqala, imovie iyintlekele. Yayikhokelwa nguTim Pope, umlawuli wevidiyo yomculo kwaye wazisa izinto ze-dia de los muertos ukuthelekisa ilitye lokuchukumisa ebusuku likaSathana kwifilimu yokuqala. Ngelixa iifayile ze Unomyayi Kwakumnyama kakhulu phantse kwaba mnyama namhlophe, Isixeko seeNgelosi mthubi kwaye iyagula ikhangeleka ngathi yikati echamelwe i-negative. Nokuba ukujika okumangalisayo okumangalisayo ngu-Iggy Pop ngokwakhe ngekhe asindise le mishmosh yefilimu engenangqondo kwaphela.
Unomyayi: IsiXeko seengelosi kwakungeyiyo hit, kodwa kwakungasondelanga ukuphela kuka-T Unomyayi uphawu, olwalulolomnini-mveliso uEdward Pressman. Ukuba iCrow entsha yayingasebenzi kubaphulaphuli- kutheni ungabuyeli ku-Eric Draven, iqhawe lehlaya kunye nefilimu yokuqala, waphosa elinye igcisa lomlo kwindima kwaye wayenza umboniso kamabonwakude odibeneyo umda omde Xena . Ngaloo ndlela Unomyayi: Izinyuko eziya ezulwini wazalwa. Kwaye ungayiqonda inkwenkwezi.
Ewe, nguSihlalo we-Iron Chef waseMelika kunye noJohn Wick 3 umguvela uMarc Dacascos ngasemva kwe-greasepaint. Izitezi eziya ezulwini wahamba nomgca wethegi Ayisiyo ukuziphindezela, imalunga nokuhlengwa kwaye walandela uEric kwimfuno yokwenza umsebenzi olungileyo kunye nokukhulula umphefumlo wakhe - kunye nomphefumlo wesithandwa sakhe. Yayingengomboniso mbi kwaphela, kodwa yayiqhuba ixesha elinye kuphela kumdibaniselwano - nto leyo ilihlazo kuba ndiyakhumbula ukuba iphelela kwi-cliffhanger eyoyikekayo.
Yabuyela kwimiboniso bhanyabhanya yohlobo lweentaka… uhlobo. Olandelayo ekunikezeleni nge-harlequin yayingu-Eric Mabius ngo-2000 Unomyayi: Usindiso . Ifilimu ibambisene noKirsten Dunst kwaye yaya ngqo kwividiyo, kodwa ayisiyiyo kwaphela iflick eyoyikisayo. Iinkwenkwezi zikaMabius njengendoda eyabulawa ngokungafanelekanga ngenxa yokubulala nanjengoko ndandilishumi elivisayo kwisikolo samabanga aphakamileyo ngo-2000 ndandiyinxalenye yayo Unomyayi Iseti yebhokisi yomdlalo bhanyabhanya. Kukho zonke izinto ze-franchise - i-BDSM ephefumlelweyo yefashoni, ubundlobongela kunye nephalethi eguqukayo, kodwa ayizange ihlale nabaphulaphuli-kuba akukho mntu wayithengisa.
Ngelixa Usindiso yayi… intle, khange isondele kufuthe lwefilimu yoqobo. Kodwa ayimnqandanga uEdward Pressman ukuba azame kwakhona ngesiphumo esothusayo: Unomyayi: Umthandazo okhohlakeleyo Umboniso bhanya-bhanya ongazange uve ngawo nangona uqaqambisa uDavid Boreanaz, uDennis Hopper, uTara Reid no-Edward Furlong. Yapheliswa ngo-2005 kwaye yoyikeka kwaye ibandakanya iyelenqe lokubiza umtyholi. Yisithuthi konke oko kuziinkwenkwezi kunokulibala kwaye kubulawe ngokufanelekileyo Unomyayi Kwiskrini.
Kodwa njengamaqhawe, Unomyayi igcina izama ukuvuka, kodwa ayifumananga traction isithuba seminyaka elishumi. Ubunini bamalungelo, istudiyo kunye umvelisi njengongenamali nangaphezulu zinento entsonkothileyo, kodwa yonke into kufuneka ilungiswe ngoku… ukanti akukho bhanyabhanya uyenziwayo.
Amarhe okuba Unomyayi Qalisa kwakhona Isiko lonyaka eHollywood kwaye amagama ahlukeneyo aqhotyoshelweyo afundeka ngokungathi ngubani wezinto ezinkulu ezilandelayo. Ngo-2008 yabhengeza ukuba UBradley Cooper Ngubani onokuthi aqondise ukuphinda kwenziwe ilungelo lokuthengisa. Oko kwatshatiswa de kwaba ngu-2011 kunye nokuphuma kuka-Cooper. Umlawuli uFrancisco Javier Gutiérrez weza kwiprojekthi, kodwa iingxaki zomthetho zaqala ngelo xesha. Besine UTom Hiddleston kwintetho, emva koko nguAlexander Skarsgard . ULuka Evans ibingaphakathi kwaye emva koko UJack Huston ngaphakathi nangaphandle.
-CORIN HARDY (@corinhardy) Nge-1 kaJuni 2018
Emva kukaSony uthathe ukuqala kwakhona ngo-2017 , eyayiza kubizwa Unomyayi ozelwe ngokutsha kwaye usebenze njengotshintsho oluthembekileyo ngakumbi. Izinto zazibonakala ngathi ziyahamba ekugqibeleni xa uJason Mamoa wathathwa ukuba athathe inxaxheba kwindima, kodwa wayeka ukuphuma okokugqibela, kunye noCorin Hardy, umlawuli wesithathu kule projekthi.
Ke, ngaba siya kuze siyibone into entsha Unomyayi kwizikrini? Imbali ibonakala isalatha kuhayi, kwaye ngokunyaniseka… kulungile. Unomyayi ngumboniso bhanyabhanya obalaseleyo, kodwa ngumboniso bhanyabhanya ozelwe ngexesha elithile kunye neemeko ezibuhlungu. Ayilulo uhlobo lwento engenakuphindwa- jonga ukuba iinzame zokwenza njalo zisilele kangakanani xa bezama. Kuya kufuneka ukuba sibayeke nje abafileyo baphumle kwaye bayayixabisa imemori, kodwa ayisiyiyo le nto yenziwa yiHollywood. Mhlawumbi ngenye imini siyakufumana ukulungelelaniswa okuhle, okutsha kwebali, kodwa okwangoku, eyokuqala ikwiNetflix kwaye lixesha elifanelekileyo lonyaka lokuphinda ubuke.
Ilivo Lokuphefumla Kwasendle
ubudala beempawu ezizodwa ze-ultron
Isiqendu sendalo yonke esenziwe ngozuko
iintsomi zenkawu ezifihliweyo zetempile
simahla ugqirha kwi-Intanethi odlala imidlalo
i-yesu enkulu lebowski gif